Ma Qaban Kartid Dhaqaale la'aan Shaqo la'aan
Apr 26, 12 • 3244 Views Faallooyinka Suuqa • Comments Off Ma Dhici Kartid Dib u Dhaqaale la'aan Shaqo la'aan
Tirada dadka Maraykanku codsanayey faa'iidooyinka shaqo la'aanta ayaa sare u kacday wiiggii sagaalaad oo toos ah, taas oo muujinaysa xoogaa hoos u dhaca suuqa shaqada ee Maraykanka. Codsiyada shaqa la'aanta ayaa hoos u dhacay 1,000 illaa 388,000 Xilliga Xilligaan la Sameeyay Isbuucii la soo dhaafay April 21, Maraykanka ...
Xoghayaha Hantidhowrka Geithner Cinwaanada Dhaqaalaha
Mar 16, 12 • 2914 Views Faallooyinka Suuqa • Comments Off Xoghayaha Hantidhowrka Geithner Cinwaannada Dhaqaalaha
Fiidnimadii ugu danbaysay, Xoghayaha Hantidhowrka Geithner wuxuu wax ka qabtaa Kooxda Dhaqaalaha ee New York. Hadalkaasi wuxuu ahaa mid aad u badan, wuxuu si tartiib tartiib ah u dhisay waddo cad oo la fahmi karo, taasoo keentay in dhagaystayaashu ay soo afjaraan in Maraykanku uu soo galayo habka dib u soo kabashada, ayuu ku daray ...
Maraykanku Weli Way Yar Yihiin Inay Fudud Yihiin, Inay Ugu Dambeystaan ​​Wadada Meesha Laga Helo?
Feb 21, 12 • 3155 Views Faallooyinka Suuqa • Comments Off on Americans ku yar yihiin Driving iyo Flying yar, Ma Waxay Ugu Dambeeyso Wadada Meesha?
"Sidaa ayuu buuggu ka fiicnayn filimka?" Waa su'aal badanaa soo noqnoqday markii rikoodhka iibka ee ugu fiican lagu turjumo shaashadda weyn. Miyuu Waddada ka walwalsan yahay filimku waa mid aan wanaagsaneyn sida buugga, si kastaba ha ahaatee, filimku runtii waa mid aad u fiican ....
Cambaareyn! Xaqiiqooyinka Giriigga ee Plato waa Maqnaansho?
Feb 9, 12 • 3825 Views Inta u dhaxaysa laynka • Comments Off on Cheers! Xaqiiqooyinka Giriigga ee Plato waa Maqnaansho?
Miyuu jiraa indho-indheynta beerta? Haddii ay sidaas ogaato meesha uu yahay iyo aad u dheer, aad u dheer. Ma jiraan wax lumis ah oo la iska rabo maadaama marnaba aysan jiri doonin, taageerada marnaba lama tijaabin doono. Marar badan maahan inaad raadiso maqaal sax ah waana kuu yimaadaa. Iyadoo raadinaya ...
Lix iyo lix Milyan oo Maraykan ah oo kaliya ma bixin karaan SNAP
Feb 8, 12 • 3185 Views Faallooyinka Suuqa • Comments Off on Forty Six Million Americans oo kaliya ma awoodo inay SNAP ka baxdo
Barnaamijka Gargaarka Nafaqada Dheeraadka ah (SNAP) wuxuu siiyaa gargaar dhaqaale oo loogu talagalay iibsashada cuntada si ay u yaraadaan iyo kuwa aan dakhliga ahayn iyo qoysaska ku nool Mareykanka. Waa barnaamij gargaar federal ah oo ay maamusho Adeegga Cuntada iyo Nafaqada ee Maraykanka ...
Superbowl iyo Fishbowl ee Maraykanka ah
Feb 7, 12 • 3024 Views Faallooyinka Suuqa • Comments Off on Superbowl iyo Fishbowl in USA waa
Waan ku riyaaqaa daawashada ciyaaraha isboortiga laakiin marnaba ma helin kubada cagta Mareykanka. Si kastaba ha ahaatee, waxaan daawaday Superbowl waqti ka waqti iyo inta ay ku dhejin lahaayeen iyo dayactirka maqaallada FXCC ee kala duwan, waraaqaha boostada iyo warbixinnada saacadaha hore ee subaxnimadii Isniinta ayaan ku lahaa. Ku ...
Miyuu Soo Noqoshada Shaqo-la'aanta ee Dalka Mareykanka Reus Moved To Work To Recovery?
Feb 6, 12 • 6046 Views Faallooyinka Suuqa • 1 Comment
Maadaama ay saameyn ku yeelatay 2008-2209 hoos u dhigtay 'wadajirka falanqaynta warbaahinta caadiga ah' waxay abuurtay erayada cusub iyo ereyada cusub ee loo yaqaan 'lexicon caanka ah'. Liiskaan wuxuu arkay aruurinta anachronisms sida ...
Markaad ku dhalatay inaad hesho Tigsi si aad u muujisid fargal
Jan 26, 12 • 3660 Views Faallooyinka Suuqa • Comments Off markaad ku dhalatay inaad hesho tikidh si aad u muujisid fargal
Markaad ku dhalatay inaad hesho Tigsi si aad u muujisid fargal. Markaad ku dhalatay Maraykanka, Waxaad Heli Karta Cirifka hore "Sababta dhabta ah ee aan ku heli karno Tobanka Amar ee maxkamada: Ma awoodi kartid inaad 'dhigi kartid,' ...
Marnaba Mawduucyada Khilaafaadka Aadamnimadu aad bay u Qosol badan yihiin, Qaar badan oo Aad u Qaaddo
Jan 19, 12 • 3187 Views Faallooyinka Suuqa • Comments Off oo aan marnaba ku jirin bani'aadamnimada bani-aadminnimada sida aad u badan, sida badan, si aad u yar
"Weligeed ma ahan Baahinta Dagaalka Aadmiga Ah Ee Aad U Baahan Tahay, Qaar badan, Si Aad Loogu Heli Karo" Waxaan isku dayayaa in aan ka fekero sheeko isku dhejisa jahwareerka iyo wakhtiyada hadda jira ee USA. "Qaar badan oo ka macaashan, badanaa, waxoogaa yar" ...
Boqortooyada Midowday ee Dib Loogu Noqon Karo Marna Marna Ka Socotay
Jan 16, 12 • 3642 Views Faallooyinka Suuqa • 1 Comment
Boqortooyada Midowday ee Dib Loogu Noqon Karo Marna Marna Ka Socotay. Xaqiiqda Runtii Maraykanku Ma'aha Muuqaal Qeexitaankii dibudhiska ayaa isbeddelay sanado badanaa oo kala duwana dalka iyo qaaradda qaaradda. Boqortooyada Midowday (UK) Dhibaato ayaa lagu qeexay laba isku xigta oo isku xigta ...